30 Sanno iyo Soomaaliland W/Q Barkhad Jaamac Batuun – Kalfadhi
Qoyskaygu waxa uu ka mid ahaa qoysas guryaha ay galaan ahaayeen Xafiiska Hay’adda shaqaalaha. Waqtigaas Abdullahi Dirawal ayaa gaadhi nagaga soo qaaday Magaaladda Dila oo aan u qaxnay! Waxa aan ka mid ah dhallinyaraddi bannaanbaxa ku gashay xerada Milatariga Birjeex, oo ku dhawaaqayey:
” Wuu dhacay Siyaad, Siilaanyo dhalay sida dhibicda roob!”
Waxa aan xassuusta iyada oo Iskarogo suug saarnaa oo magaceedana la odhan jiray ‘Sahra Tuugo’ in marka ay suuqa timaaddo la kala yaaci jiray, marka suugga saaran la rido! Waxa aan garanaya Hargeysada hadda siraadan oo afarta galabnimo guryaha la kala galo cabsi darteed.
“ Soomaalilaan Dalkayga. Soomaalilaan Dadkayga.”
Waxaa qoray Barkhad Jaamac Batuun
Gudiga qaban qaabada Shirka Wadatashiga Qaran oo maanta kulan ku yeeshay Muqdishu
Ra’iisalwasaare Roble waa in uu shan arrimood oggaado ka hor inta uusan tagin shirka 20ka May
Ra'iisalwasaare Roble waa in uu shan arrimood oggaado ka hor inta uusan tagin shirka 20ka May